KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Sarkaal Mareykan ah oo u shaqeeya Saracen International oo lagu dilay Gobolka Barri
Saturday 28 April 2012 11:03
Sarkaal Mareykan ah oo u shaqeeya Saracen International oo lagu dilay Gobolka Barri
BOSAASO (Keydmedia) - Wararka saakay laga helayo Gobolka Barrie ee Dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in Sarkaal sare oo ka tirsanaa Hay’adda Saracen International u qaabilsanaa tababaridda Ciidamada la dagaalanka Burcad badeedda ee Maamulka Puntland lagu dilay Gobolkaasi.
Ninkan oo u dhashay Dalka Maraykanka ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay shalay gelinkii danbe Deegaanka lagu magacaabo Timirshe oo ka tirsan Degmadda Isku-shuban ee Gobolka Bari.
Dilka Sarkaalkan ka shaqaynayay Shirkadda Saracen International ayaa yimid sida ay dad Goobjoogiyaal ahaa u xaqiijiyay Keydmedia kadib markii Ciidamada ka tirsan kuwii uu tababarka siinayay uu dhexmaray Dagaal Gacan ka hadal ah taasi oo keentay in rasaastii ay ku fureen Ciidamada Soomaalida ah uu ku geeriyooday.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Sarkaalka la dilay uu hoggaaminayay Ciidamada ka tirsan Maamulka Puntland.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in kooxaha ajbaniga ah ee ka howl gala shirkadaasi ay ku howlanaayeen xaalufin iyo baarasho ugu dhaqaaqay Buuraha iyo khayraadka kale ee Gobalada Waqooyi Bari gaar ahaan magaalada Isku-Shuban, iyadoo beelaha daga magaalooyinka Bari Odayaashooda ay Ninkaan iyo Shirkadiisa uga digeen iney joojiyaan howlaha xatooyada ah ee ay ku hayaan kheyraadka ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Isla markaana loo baahan yahay in uu joojiyo bililiqada uu ku hayo.
Sidoo kale odayaasha dhaqanka ee degaanadaasi ayaa sheegay in shirkadaan ay ku howlan tahay in sunta halista ah ay ku duugto dhulka Waqooyi Bari ee Soomaaliya.
Ninkaan ayaa la sheegay iney dileen ilaalada Maleeshiyada Faroole, Meydka Sarkaalkan ayaa waxaa saakay laga qaaday Garoon ku yaalla Magaalada Boosaaso,iyadoo loo duuliyay dalka Jabuuti, halkaasi oo Saldhigyo Militeri ay ku leeyihiin Ciidamo Maraykanka.
Keydmedia.net - Xafiiska, Gaalkacyo